Ny zazalahy tsara rehetra dia manao tsara avy amin'i Jeremy Denk Review: Memoirs of a Virtuoso | Autobiography sy fahatsiarovana - World Book
Ny zazalahy tsara rehetra dia manao tsara avy amin'i Jeremy Denk Review: Memoirs of a Virtuoso | Autobiography sy fahatsiarovana
Enga anie 19, 2022 ny worldbook
Ny maha-mpitendry mozika dia mianatra miaina miaraka amin'ny paradox. Io no fehin-kevitra noraisin'i Jeremy Denk, mpitendry piano malaza Amerikana, taorian'ny 40 taona mahery niasany tamin'ny filalaovany. Ao amin'ny mozika klasika dia misy antsipiriany bebe kokoa tokony hamboarina sy fanamby ara-teknika ho resena, fa ny fientanentanana amin'ny fifehezana tanteraka ihany koa no mety hanakana anao tsy hahatratra izany. Ny mpanoro hevitra an'i Denk, ilay Hongroà-Amerikana mpitendry piano György Sebők, indray mandeha dia nilaza tamin'ny mpianany fa ny olany lehibe dia ny maha-perfectionista azy, na dia mikendry ny hahatonga azy ho toy izany aza ny zava-drehetra ao amin'ny fanabeazana mozika. Ny tena mpitendry mozika dia tsy maintsy manaiky fa tsy afaka mandresy izy amin'izay, fa miezaka hatrany.
Tsy azo tsinontsinoavina ny fanomezan-toky an'i Denk: Ankoatra ny nahazoany vatsim-pianarana MacArthur (na "Fanaraha-maso Genius"), dia nitety an'izao tontolo izao izy, niseho tsy tapaka tao amin'ny Carnegie Hall any New York, ary nitana ny sarin'ny Billboard Classical tamin'ny firaketany an'i Bach's Goldberg Variations. Tamin'ny taona 2014, ny fampisehoana ny Sonata Piano farany nataon'i Beethoven dia nofidian'ny Radio 3's Building a Library ho rakitsary tsara indrindra natao tamin'ny piano maoderina. Ny mpitsikera David Owen Norris dia niantso an'i Denk ho "pianista maoderina izay mahafantatra ny hafetsena taloha rehetra" ary afaka manolotra fampisehoana tena izy amin'ny fomban'ny mpandahateny mahay: mampientam-po, mandresy lahatra, fa tsy voafehy.
Na izany aza, rehefa mitodika amin'ny fanoratana boky ny talenta mahatalanjona toy izany amin'ny sehatra hafa, dia manana antony tokony hiahiahiana ny mpamaky mahay manavaka. Ny fahatsiarovana “Ahoana no Nataoko” amin'ny mozika klasika dia mirona ho tafiditra ao anatin'ny sokajy roa: ny tantara cheesy, matetika nosoratana tamin'ny matoatoa momba ny fahombiazana mamirapiratra; ary ny tantara tsy nampoizina momba ny resy mangatsiatsiaka izay nandika ny fitsipika rehetra, tsy nety nanao karavato an-tsehatra, fa mbola nahomby ihany tamin'ny farany. Samy tsy dia maivana loatra na manome fahalalana ny mamaky.
Every Good Boy Does Fine, ny fitantaran'i Denk momba ny diany tamin'ny fianarany piano voalohany tany New Jersey tamin'ny enin-taona ka nahazoany ny diplaomany amin'ny fampisehoana piano avy amin'ny Sekoly Juilliard tamin'ny telopolo taona, dia miavaka amin'ity fitsipika ity. Nanomboka ny fiainana tamin'ny 2013 ho lahatsoratra ho an'ny The New Yorker izy io, ary efa nivoatra ho fahatsiarovana kanto, mahitsy ary voalamina tsara izay manohitra tanteraka ny cliché.
Ny dikanteny amin'ny boky dia Tantaram-pitiavana, ao amin'ny lesona mozika. Denk dia mampiasa ny fandrosoany amin'ny alàlan'ny rafi-pampianarana mozika mba hanomezana rafitra ho an'ny fitantarana ho avy lehibe kokoa, izay ianarany momba ireo karazana fitiavana: ho an'ny mozika, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny namana, ho an'ny mpivady am-pitiavana. Nanomboka fampianarana niaraka tamin'ny mpampianatra mpifanolo-bodirindrina iray izy taorian'ny fampitandremana ny ray aman-dreniny tany an-tsekoly fa tandindonin-doza amin'ny “olana ara-pihetseham-po” i Jeremy tanora raha tsy hoe mahita vahaolana ho an'ny fihetseham-pony. Vitany haingana ireo lesona ireo ary nifindra tany amin'ny mpampianatra matotra hafa, avy eo, ary iray hafa.
I William Leland, iray tamin’ireo mpampianatra azy tany am-boalohany, dia nitazona diary tsara ho an’i Jeremy tanora izay nanoratany fanehoan-kevitra nandritra ny lesona tsirairay ary nametrahany andraikitra ho an’ny manaraka. Raha tokony ho ireo mpampianatra mozika kintana mipetaka matetika no asehon’i William, dia nanao sariitatra kely i William, nampifanaraka izany tamin’ny hafatra tiany hampitaina. Tao anatin'ny herinandro tsara, namirapiratra tamim-pireharehana ny kintana na nanao halo; Ao amin'ny olon-dratsy, Jeremy mahantra dia nolavina kintana ary nomena sariitatra misy slug na centipede diso fanantenana. Taona maro taty aoriana, mbola manenjika an'i Denk ny andian-teny ao amin'io kahie io rehefa mipetraka hanao fampisehoana izy. Na dia mahafatifaty aza ireo sary ireo (miparitaka manerana ny boky ny famoahana ireo sy ireo fanamarihana mozika hafa tamin'ny fahazazany), dia nijanona ny fanakianana nasehon'izy ireo.
Tena tsara indrindra i Denk rehefa nitantara ny antsipirian'ny fikatsahany ho tsara kokoa amin'ny zavatra sarotra toy ny piano klasika mandroso. Misy fifaliana lalina amin'ny famerimberenana, amin'ny fandehanana any ivelan'ny fitaovana iasanao sy ny fitadiavana singa vaovao mbola tsy nihalehibe. Ny fanazaran-tena fitaovana dia dingana sarotra fotsiny amin'ny fanjohian-kevitra amin'ny hozatrao manokana mandra-pihetsehan'izy ireo tsy misy fieritreretana.
Mitaky tsemboka, mikaroka ary manao fahadisoana ratsy, ary avy eo manao azy ireo indray.
Ny atidoha sy ny vatana dia miady amin'ny toerana sy ny fihetsiky ny rantsantanana. Amin'ny toe-javatra iray, Denk dia manoritsoritra ny fizotry ny fifehezana andian-tsoratra fito fohy ao amin'ny Concerto Piano Faharoa an'i Brahms rehefa avy naninjitra ny rantsantanana ho toy ny "ping-pong saina-hozatra" ary "manalefaka ny vongany, toy ny milalao piano vita amin'ny ovy voatoto. . ovy". Mba hamoronana mozika toa tsotra toy ny eritreritra na faniriana, dia mila hatsembohana, mikaroka, ary manao fahadisoana tena ratsy, ary avy eo mamerina azy ireo indray.
Rehefa mirakitra ny fivoarany manokana amin'ny laharan'ny mozika klasika izy, dia manenona tantara mamy momba ny fianakaviany ihany koa i Denk sy ny fomba nampiraisan'izy ireo ny fitiavany mozika tany am-boalohany sy nahatonga azy hahatsiaro ho tafasaraka. Nolazainy ny traikefa "masina loatra, radioaktifa loatra" tamin'ny nandrenesany voalohany an'i Mozart's Symphony Concertante tamin'ny kasety teo amin'ny faha-12 taonany ary naniry avy hatrany ny hanokatra ny varavaran'ny efitranony mba hizara ny zavatra reny amin'ny ray aman-dreniny. Fa ny tahotra sao ho esorina haingana dia mamono ny fo: ny rainy haneso azy, ny anadahiny hoheveriny fa mamitaka, ny reniny no hangataka azy hanao raharaha ho azy. Mipetraka amin’ny tany àry izy ary mihaino ny tenany.
Ny iray amin'ireo zavatra mamelombelona indrindra momba ny asa soratr'i Denk dia ny fomba fiasany amin'ny mozika. Tsy misy fahasarotana na fihatsarambelatsihy tsy ilaina ao amin'ny asa sorany momba an'i Mozart, Beethoven, Brahms, sy ny toy izany. Tsy misoroka ny fampiasana ny teny filamatra momba ny mozika izy, fa mampiseho kisarisary kely natao tanana sy sombiny tamin'ny mozika an-taratasy mba hanazavana ny zavatra lazainy. Ny vokatr'izany dia feo maivana sy mampahafantatra izay ho vakian'ireo mpankafy mozika klasika sy ireo vao tonga. Zava-bita tsy fahita firy izany. Ho solon'ny bibliographie, ny boky dia manana lisitry ny vakiteny misy fanamarihana ho an'izay te hihaino mandritra na aorian'ny famakiana, izay zavatra mahafinaritra.
Angamba ny zava-bita lehibe indrindra amin'ity tantara ity anefa dia ny mahatonga ny mpamaky hiahy an'i Denk mihoatra ny talentany amin'ny fitendry piano. Taorian'ny nandrakitra an-tsoratra ny taona rehetra nisian'ny fahavononana sy ny fangirifiriana nolalovana mba hifehezana ireo mpamoron-kira lehibe, dia noho ny fahasambaran'izy ireo, fa tsy ny fahombiazany, no nametrahanay ny fototra. Teo amin’ny faha-32 taonany, rehefa nahavita ny diplaomany tamin’ny farany, dia nifanakalo fijery tamin’ny olon-tiany izy ary nahatsapa fa tsy mila mivoaka izy satria “efa lasa lavitra izy, tsara lavitra”. Io fahavaratra feno fitiavana voalohany be voninahitra io no mozika mampientanentana indrindra nampanantenainy azy: “Heveriko fa nitendry piano aho; Tsy tadidiko fotsiny," hoy izy nanoratra.
Jeremy Denk's Every Good Boy Do Fine dia navoakan'i Picador (£20). Mba hanohanana ny libromundo sy The Observer, manaova dika mitovy amin'ny guardianbookshop.com. Mety mihatra ny saram-pandefasana.
Sokajy Vaovao farany Ticket navigation
Ruth & Pen Review nataon'i Emilie Pine: The Tale of Two Lives | Fiction
Thrillers amin'ny volana - famerenana | tantara momba ny polisy
Ny Hevi-dehibe: Nahoana isika no tsy tokony hiakatra | Boky